China China EIR laminate flooring fekitori uye vagadziri | DEDGE
8mm EIR laminate flooring yakagadzirwa neEGEGE Mapuriro
Imba inogadzirwa naDEGE, DEGE Imba
Izvo zvakasikwa, zvakapusa uye nerunyararo runako
Iyo yakapusa, yakasununguka, inozvininipisa uye yakanaka runako
Sanganisa iyo nzira yehupenyu mukureruka uye runyararo
Inzwa runako rwehupenyu muhupenyu
Ruvara Tine mazana emazana emavara esarudzo yako.
Ukobvu 7mm, 8mm, 10mm, 12mm zviripo.
Saizi 1218 * 198,1218 * 168,1218 * 148,1218 * 128, 810 * 130,810 * 148,800 * 400,1200 * 400,600 * 100
Surface kurapwa Anopfuura makumi maviri marudzi epamusoro, akadai Embossed, Crystal, EIR, Handscraped, Matt, Glossy, Piano etc.
Edge kurapwa Square Edge, Mould yekudhinda U-groove, 3 mitsetse U grovoe, V-Groove nekupenda, bevel kupenda, waxing, padding, muchina nezvimwe zvinopihwa.
Kurapa kwakakosha Dhinda U-groove, Painted V-groove, Waxing, Logo yakapendwa kumashure, Inzwi Evha / IXPE
Pfeka Kuramba AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 mureza EN13329
Base zvinhu 770 kg / m³, 800 kg / m³, 850 kg / m³ uye 880 kgs / m³
Dzvanya system Unilin Kaviri, Arc, Imwe, Kudonha, Valinge
Kuisa Nzira Inoyerera
Formaldehyde Emission E1 <= 1.5mg / L, kana E0 <= 0.5mg / L
Ndeapi matambudziko eEIR Laminate Flooring anoitika nyore? Ungazvigadzirisa sei?
Sechinhu chakajairika uye chakajairwa pasi, EIR Laminate Flooring yave ichizivikanwa nemusika pamutengo wayo unodhura uye nekuita. Panguva imwecheteyo, mamwe matambudziko mushure mekumisikidzwa kwevhu rakaputirwa akateverawo.
1. Iwo maseams ari kubhururuka
A. Anopupira furo padenga repamusoro: Kana uchinge wapomba pasi, kudonhedza mvura kubva mumopu kana hunyoro hweshangu kunokonzeresa kuti mvura iungane pasi pevhu uye inopinda ichibva mumajoini ine saizi shoma. Muchiitiko ichi, majoini epasi pevhu zvishoma mabhuru;
B. Mvura yekupinda uye kubhururuka pasi pevhu: Icho chiitiko chepamusoro ndechekuti majoini anoputika mune imwe yunifomu chimiro, nzvimbo dziri padhuze nemvura dzinorema uye dzakaomarara, uye iwo madaro anowedzera uye akati wandei. Matambudziko akadai ndeaya: padyo nepabathroom, kicheni, Heating pombi, air conditioning condensate drainage, windows, etc. Kana iyo mvura yakanyudzwa kwenguva yakareba, iyo surface phenomenon haichisiri pachena, unogona kuvhura pasi kuti utarise kana paine watermark;
C.Laminate Wood Floor mapfupi majoini bulge: Inoratidzwa seyakaputika yega yega pfupi divi rakabatana yeiyo refu strip pasi, iyo inowanzo kukonzerwa neyakawandisa ivhu hunyoro. Iyo yakakwira iyo bulge, inowedzera iyo ivhu hunyoro.
2. FLoor iri Arched
Iko kumisikidzwa kwepasi kuri nekuda kwekuwedzera kwevhu kana riine nyoro uye pasi pechiitiko chekupisa, saizi inowedzera uye pasi rakanyatso kubatanidzwa pamwechete uye risingakwanise kutambanudza. Inogona kungozvimba kumusoro uye arch. Zvikonzero zvinotevera.
A. Mushure mekunyorova kwepasi, ivhu repasi rinowedzera, zvichikonzera kuumbwa;
B. Paunenge uchigadzika pasi, inguva yakaoma, uye makiyi akaisirwa zvakanyanya. Naizvozvo, kana hunyoro hwezvakatipoteredza huchiwedzera zvakanyanya, pasi panowedzera pamwe nekuwedzera kwemhepo yekunyorova. Nekuti iro gungano rakasimba, hapana kwekuwedzera, izvo zvinokonzeresa kuita arching chiitiko.
C. Iko hakuna kuwedzerwa kwekubatana pakati pemadziro uye pasi kana iyo yekubatanidza yekuwedzera haina kuchengetwa zvakakwana. Kana uriri hwanyorova uye huchiwedzerwa, pasi hapana pekuwedzera, izvo zvinoita kuti pasi igare;
D. Iyo imba yakavhurika: Kana uchiisa pasi mukati memakamuri anopfuura maviri, hapana zvekusunga zvinoiswa pamubhedha wegonhi. Kana hunyoro uye hunyoro hukakwira, pasi pemakamuri maviri anotambanudza yakatwasuka, zvichikonzera musuwo wekamuri kupindirana pamwe nekuumburudza pasi;
E. Iyo yekubatanidza yekuwedzera yakazadzwa ne baseboard zvipikiri kana plaster, putty, yekuwedzera block, nezvimwewo, izvo zvinoita kuti pasi ratadza kutambanudza uye rinokonzera pasi kuti arch;
F. Panguva yekumisikidzwa, zvinhu zvekunze zvinoramba zviri pasi pevhu, zvichikonzera kuumbwa;
G. Dura repasi pasi pevhu rakaputirwa. Semuenzaniso, panotove paine huni hwakasimba pasi pevhu yekutanga usati waisa pasi. Mushure mekunge pasi raiswa, iro rekutanga pasi rakanyorova uye rakaumbwa, zvichikonzera kuti pasi riumbwe;
H. Usati wagadzika pasi, iyo firimu-inoyeuchidza firimu haisi panzvimbo kana chisimbiso hachina kuomarara, uye hunyoro hunopinda muvhu kuburikidza nefirimu-isina humbowo firimu, uye pasi iri arched.
A. Pasi isina kuenzana: Pave iyo laminated uriri kana ivhu risina kuenzana, uye mushure menguva yekushandisa, iyo glue iri pakati pepasi inosunungurwa uye pane mukaha;
B. Less sizing: pasi panopisa munguva yechando, mweya wakaoma, iyo pasi ndege inodzikira, iyo yekubatanidza glue haina kukwana, uye simba harikwani, izvo zvinoita kuti pasi itsemuke;
C. Pane zvinhu zvinorema padivi: kufanana kwepasi kunogadziriswa kunosimbirwa nechinhu chinorema munzira yekumusoro, zvekuti pasi haigone kutsemuka zvakasununguka uye kutsemuka; mhando iyi yemakamuri ichave yakarongedzwa muzhizha, uye kana kudziya kuchiuya munguva yechando Kuratidza kutsemuka;
D. Mwaka wemvura unowanzoitika kuitika kwedambudziko iri.
4. EIR Laminate Flooring Surface zvikanganiso
A. Kudonhedzwa kwekona: Mapundu pasi panguva yekubata, vashandi vekuvaka havana kuteerera panguva yekuvaka kana foshoro yakatsemuka pakanamwa glue mushure mekuvaka, izvo zvakakonzera makona epasi kudonha makona;
B. Iyo yepamusoro yepamusoro inodonha: Mushure mekuvaka kwapera, maturusi akapinza kana zvinhu zvinorema zvinowira nekukuvadza pasi, izvo zvinokanganisa kuoneka kwepasi; kana panguva yekuita kwepasi, iyo yepamusoro dhayeti uye substrate hazvina kunamirwa zvakanaka. Mushure mekushandisa kwenguva yakati, iyo yepamusoro dhayeti uye substrate inoderedzwa;
C. Kukweshwa: Kana uchifambisa fenicha kana zvinhu zvinorema pasi, pane nzara kana jecha uye mamwe marara pakati pevhu nezvinhu. Kukweva pasi kunokanganisa kukanzura uriri kana kuratidza kukwenya kuri pachena. chirongwa chekuchengetedza: wakisi Patch kana chinja pasi.
Dambudziko reruzha rwepasi rine zvinhu zvinotevera:
A. Ndiwo ruzha rwekupesana pakati pekiyi dzepasi; nekuti makiyi ane hunyanzvi hwepamusoro uye akaunganidzwa zvine mutsindo, mushure mekuvakwa kweglue-isina, chikamu chemasvosve chinogona kuratidza kurira "kurira"; Mamiriro acho haawanzo kuoneka kana pasi paine mamiriro akanaka.
B. Inzwi rekumusoro kwepasi uye netambo yekutsvedza; kana iyo skirting tambo yakaiswa zvakare zvine mutsindo pasi, zvinogona kukonzeresa uye ruzha pakati peguruva uye skirting mutsetse.
C. Dambudziko repasi ndicho chinokonzera ruzha rwepasi. Kana iyo pasi ikakwanisa kusvika pakakwirira isingasviki matatu metres mukati meyero yemamita maviri, ruzha rwepasi ruchaderedzwa zvakanyanya.
D. Ukobvu hwepasi hwepasi hunodarika chiyero, icho chinokonzereswa nekusimba kwakanyanya.
E. Haina kukwana akachengetedzwa ekuwedzera majoini, zvichikonzera kushomeka kwepasi kuwedzera, uye zvishoma arched deformation muhurefu kana hupamhi kutungamira kwepasi.
F. Kusakwana kumhanya kweiyo keel kunokonzera iyo laminated uriri uye keel kuti zvibatanidzwe zvakachengeteka, zvinozokonzeresa kutsvedza pakati pehuni nehuni kuita ruzha.
Yakakura Embossed Surface
Diki Yakakwenenzverwa Pamusoro
Denga Chairo Pamusoro
Yepakati Yakashongedzwa Pamusoro
Dzvanya Maitiro Anowanikwa
Back Colors Inowanikwa
Kurapwa Kwakakosha Kunowanikwa
Yekuongorora muchina Bvunzo
Yakakwirira Glossy Bvunzo
Laminate Floor Package Nhoroondo
Saizi pcs / ctn m2 / ctn ctns / pallet plts / 20'cont ctns / 20'cont kg / ctn m2 / 20'cont kgs / 20'cont
Laminate Floor Mudziyo Kutakura - Pallet
Laminate Floor Mudziyo Kutakura - Carton
Pashure: 10 mamirimita EIR laminate pasi
Zvadaro: ChiFrench Bleed Laminate Wooden Flooring
8mm eir rakapetwa pasi
10mm eir rakapetwa pasi
11mm eir rakapetwa pasi
12mm eir rakapetwa pasi
1. Dzidzisa iwe sei kuisa laminate flooring wega
Nhanho 1: Gadzirira maturusi
1. Magetsi ekushandisa; 2. Tape chiyero; 3. Penzura; 4. Ruoko rwemaoko; 5. Spacer; 6. Nyundo; 7. Tsvimbo yekuzunungusa
1. Laminate uriri 2. Chipikiri 3. Underlayment
Nhanho 2: Kugadzirira usati waiswa
1. Laminate flooring inoenderana nharaunda
Ndokumbirawo muise pasi rakaminama rawatenga mukamuri kuti rizoradzikwa kana mazuva maviri pamberi, uye uvape nguva yakakwana yekuenderana nekuwedzera kana kudzora kwetembiricha yemukamuri uye mwando. Izvi zvinodzivirira kukombama kana mamwe matambudziko mushure mekumisikidzwa.
2. Bvisa kutsvedza
Bvisa iripo skirting tambo kubva kumadziro uchishandisa pry bar. Isa chidimbu padivi wochidzorera. Inoyerera laminate (iyo mhando inoshandiswa mune ino purojekiti) inofanirwa kuiswa pane yakaoma, yakatsetseka pamusoro, senge vinyl. Kana uripo huripo hwakuvara, bvisa kuti uburitse pasi.
Nhanho 3: Tanga iyo yekumisikidza
Kuisirwa base zvinhu
1. Kuisirwa chigadziko
Kuisa pamutsago kuti kuyangarara laminate uriri. Bvisa zvinodyiwa, zvipikiri uye mamwe marara kubva pasi. Usatenderedza mitsetse iri padhuze, shandisa banga rekushandisa kuvacheka pazvinenge zvichidikanwa. Iyo furo padding inogona kudzikamisa ruzha uye kubatsira pasi kuti inzwe kuwedzera kusimba uye kusimba.
2. Kuronga marongero
Kuti uone kutungamira kwepuranga, tarisa kuti ndeupi madziro akareba uye akatwasuka. Dzivisa zvidimbu zvakamanikana pane yakakosha madziro. Iyo puranga mumutsara wekupedzisira inofanira kuve inokwana 2 inches paupamhi. Dhirowa pikicha pa 1/4 inch gap yemadziro ega ega.
Ongorora: Kana hupamhi hwemutsara wekupedzisira uri pasi pe2 inches, wedzera upamhi uhwu kuhupamhi hwebhodhi rese uye urikamure ne2, uye cheka yekutanga uye yekupedzisira mitsara yemabhodhi kune upamhi.
3. Kucheka basa
Zvichienderana nemaitiro ako, ungangoda kubvarura kana kucheka mutsara wekutanga wemabhodhi kureba. Kana ukashandisa saga yemagetsi, cheka rutivi rwakapedzwa pasi; kana uchishandisa ruoko saha, cheka iro rakapedzwa kumusoro. Paunenge uchicheka mabhodhi, shandisa zvidhina kugadzirisa mapuranga.
4. Nzvimbo yekuchengetera
Laminate flooring kits inoda nzvimbo yekukwirana pakati pemadziro uye mapuranga kusiya 1/4 1/4 inch kuwedzera kubatanidzwa. Kana iyo base ndiro yaiswa, inenge isingaoneke.
5. Tenga mutsara wekutanga
Isa rurimi parutivi rweplanga rakatarisana nemadziro (vamwe vagadziri vanokurudzira kuti uteme rurimi rweplangwe rakatarisana nemadziro). Unganidza rimwe puranga kune rimwe nekubatanidza mitauro uye maburi. Iwe unogona kukwanisa kubatanidza mabhodhi akasimba neruoko, kana iwe ungangoda kushandisa matanda uye sando mune yekuisa kit kuti uzvikwere pamwe chete, kana kushandisa tapping matinji kumisikidza majoini pamwechete. Cheka bhodhi rekupedzisira mumutsara kusvika pakureba (kana iri gumi nemaviri pakureba, chengeta zvidimbu zvidiki izvi).
6. Isa mimwe mitsara
Paunenge uchiisa imwe mitsara, dzedzereka seams mumitsara iri padhuze nema12 inches, sekuonekwa pamadziro kana zvidhinha. Kazhinji, iwe unogona kutanga mutsva mutsara nezvimedu kubva pane yakatemwa puranga kuti upedze yapfuura tambo.
7. Isa mutsetse wekupedzisira
Mutsara wekupedzisira, iwe unofanirwa kutsveta puranga richiiswa panzvimbo pakona, uye zvinyoronyoro kuitora munzvimbo riine pry bar. Ita shuwa yekusiya 1/4 inch yekuwedzera yekubatanidza pakati pemutsara wekupedzisira uye madziro.
8. Cheka furemu yemusuwo
Usaedze kucheka puranga kuti rikwane furemu yemusuwo. Panzvimbo iyoyo, shandisa divi resaha kutema furemu yemusuwo kusvika pa 1/16 inch kukwirira kupfuura kukwirira kwepasi, kuitira kuti imba yebhodhi ikwanise kutsvedza pasi pefuremu. Isa pasi yakasungwa pasi uye padyo nehombodo. Isa furemu yemusuwo yakaonekwa pamusoro, uye wozocheka goko racho kusvika pakukwirira kwaunoda.
9. Dzorerazve zvimwe zvinhu
Dzorerazve tambo yekushongedza. Mushure meplank yave panzvimbo, shandisa sando nezvipikiri kudzoreredza iyo yepasi skirting trim. Wobva waisa shangu muforoma pane yekuwedzera mubatanidzwa uye shandisa shanduko tambo kubatanidza iyo laminate kune iri padyo pevhu, senge tile kana kapeti. Usachiroverere pasi, asi chipikirire kune zvakashongedzwa nemadziro.
2. Laminate flooring tinya system
Inosanganisira akasiyana tinya system, ingo tinya chimiro zvakasiyana, asi zvakafanana gadza nzira.
Iro zita, Kamwe kudzvanya, Dhinda kaviri, Arc tinya, Donhedha tinya, Unilin tinya, Valinge tinya.
3. Newest Laminate flooring zvechizarira hurongwa
12mm Kudonhedza pasi laminate flooring yakanakira mukana ndeyeKuisa nekukurumidza, Chengetedza zvimwe makumi mashanu% yekuisa laminate matanda epasi nguva.
Old Pine EIR laminate pasi
10 mamirimita EIR laminate pasi
Chaicho Wood Walnut EIR laminate pasi
3 ubvise u-groove yakakwira glossy hdf EIR laminate ...
ChiFrench Bleed Laminate Wooden Flooring
8MM EIR laminate pasi